Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee Argentina oo weerar ku qaaday Barcelona sababa la xiriira Messi – Gool FM
(Barcelona) 25 Sebt 2020. Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee Argentina ee ClaudioTapia ayaa weerar afka ah ku qaaday maamulka kooxda Barcelona, ​​sababo la xiriira qaabkii ay ula dhaqmeen Lionel Messi.
Dhibaato weyn ayaa ka dhex dhacday Lionel Messi iyo kooxdiisa Barcelona intii lagu jiray xilliyadii lasoo dhaafay, waxayna gaartay heer uu codsaday xiddiga reer Argantina inuu ka tago garoonka Camp Nou.
Si kastaba ha noqotee, xiisadda ayaa ugu dambeyntii dhamaatay, kaddib markii uu Lionel Messi go’aansaday inuu iska sii joogo garoonka Camp Nou xilli ciyaareedkan 2020/21, maadaama Barcelona ay ku adkeysatay in la bixiyo qiimaha lagu burburin karo heshiiskiisa kaasoo gaaraya 700 million euro. xilli qandaraaskiisa kooxda Barcelona uu dhacayo xagaaga 2021.
Haddaba ClaudioTapia ayaa wareysi uu siiyay “Radio Catalonia” ee dalka Spain wuxuu ku sheegay:
“Marka loo fiiriyo heerka shaqsiyeed, Messi wuxuu marwalba ka sareeyay dhamaan asxaabtiisa, sidaas darteed waxaan u maleynayaa kaddib waxa uu u qabtay Barcelona, inay cadaalad darro tahay waxa ay isagu ku sameeyeen, mana u qalmo in sidaas loola dhaqmo”.
“Waan u hambalyeynayaa sababtoo ah marwalba waan ogaa inuu dhammaystiri doono qandaraaskiisa illaa uu ka dhammaanayo, si fiican ayaan u garanayaa, balse si wanaagsan ulalama dhaqmin isaga”.
Waxaa xusid mudan in Lionel Messi loogu yeeray liiska xulka qaranka Argentina, ee uu ku dhawaaqay tababare Lionel Scaloni, kuwaasoo ka qeyb galaya labada kulan Ecuador iyo Bolivia ee ka tirsan kulamada isreebreebka Koobka Adduunka ee 2022, waxaana labadan kulan la ciyaari doonaa bisha October ee soo socota.